UNOB Statement | U.N.O.B
ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် (View in PDF Format)
Comment section တစ်ခုတွင် လာရောက်ရေးသား အကြံပြုသွားသော Member ကိုအင်ဒရုး ၏ အကြံပြုချက်ကို လေးစားခြင်းအားဖြင့် ပြန်လည် ရှင်းလင်းဖေါ်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးလည်း မျိုးစုံကြားပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းနှင့် မသက်ဆိုင်သော ဘာသာရေးကိစ္စဖြစ်၍ တစ်ကြောင်း၊ လူတယောက်ချင်းစီ၏ ထင်မြင် ယူဆချက်များကို အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုမှ ပြန်လည်ရှင်းလင်း ဖေါ်ပြနေရန်မလို ဟု ယူဆသောကြောင့်လည်းကောင်း မည်သည်ကိုမျှ ရှင်းလင်းမနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် အဖွဲ့၏ဂုဏ်သိက္ခာကို ညှိုးနွမ်းစေရန် ရည်ရွယ်၍ မဟုတ်မမှန် ပြောဆိုနေသူများကို အဖွဲ့ဝင်များကိုယ်စား ကာကွယ်ရန် တာဝန်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့် လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ မေးခွန်းများကို ရှင်းလင်းရန်အလို့ငှာ ယခုလို ထုတ်ပြန်ကြေငြာရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပထမဆုံး အနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့ UNOB အဖွဲ့၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ ရပ်တည်ချက်များအရ ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေးများနှင့် မပတ်သက်သော လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံ မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သော လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းသာဖြစ်ကြောင်း အဖွဲ့၏ (အခြေခံဥပဒေ) ထဲမှာ အတိအလင်းဖေါ်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အကြိမ်ပေါင်း မြောက်များစွာ အခါအခွင့်သင့်တိုင်းလည်း ပြောဆိုနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်း တွင်လည်း နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး စကားများ တခွန်းတလေမှ ပြောဆိုခြင်းမရှိကြောင်း (Video) မှတ်တမ်းများတွင် ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ယဉ်ကျေးမှုရှိသော (Civilized Society) လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ ဘာသာတရား၊ တိုင်းပြည်တိုင်းတွင် စည်းကမ်း၊ ဥပဒေ၊ ပဲ့ပြင် ဆုံးမချက်များ ထားရှိကြပါသည်။ ထို စည်းကမ်း ဥပဒေ အဆုံးအမများအတိုင်း နေထိုင်မှသာ လူပီသသူ၊ ဘာသာတရား လေးစားကိုင်းရှိုင်းသူ၊ နိုင်ငံကြီးသား ပီသသူဟု သတ်မှတ်ကြပါသည်။
ကျွန်တော်များ UNOB အဖွဲ့သည် ပြီးပြည့်စုံနေသော အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု မဟုတ်သေးသော်လည်း တစ်နေ့တွင် မြန်မာလူမျိုးများ၏ အကျိုးကိုရှေ့ရှုသော စည်းလုံးသော အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်လာစေရန်ရည်မှန်း၍ မိမိတို့တတ်နိုင်သမျှ ကြိုးစားနေကြခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ အဖွဲ့တစ်ခု၏ အင်္ဂါရပ်နှင့်ညီသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ထားရှိပါသည်။ အဖွဲ့၏စည်းကမ်းများ အတိုင်းလည်း အလုပ်များကို အမြဲတစေ အချိန်မီပြီးမြောက်စေရန် ကြိုးစားလုပ်ကိုင် ကြပါသည်။
ဘာသာပေါင်းစုံ လူမျိုးပေါင်းစုံ ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်နှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံသားမှန်လျှင် အယုတ် အမြတ် အလတ်မရွေး ပါဝင်ခွင့်ရှိပါသည်။ ထိုစည်းကမ်းချက်ကြောင့် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ အားနည်းချက်တစ်စုံတစ်ရာရှာ၍ ပိတ်ပင်ထားခြင်းမျိုးမပြုပါ။ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းမျှ၏ သြဇာအာဏာနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို မလုပ်ပါ။ အရေးကြီးသော ဆုံးဖြတ်ချက်များ အားလုံးကို အမှုဆောင်များ၏ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုများဖြင့်သာ လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ အမှုဆောင်များဆိုရာဝယ် အဖွဲ့ကို ဦးဆောင်နေသူများဖြစ်သလို အဖွဲ့၏ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးများသည်လည်း ၎င်းသူများအပေါ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ တစ်ချိန် အမှားအယွင်း တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ခဲ့သော် အားလုံးမှတာဝန်ယူ ဖြေရှင်းကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အဖွဲ့၏ရည်မှန်းချက်မှာ တစ်ရေတစ်မြေခြားရောက်ရှိလာကြသော လက်တစ်ဆုပ်စာမျှသာရှိသည့် ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုများ အနာဂတ် အကျိုးကိုမျှော်၍ စည်းစည်းလုံးလုံးရှိသည့် မျိုးနွယ်စုတစ်ခု ဖြစ်ရေးကိုသာ အဓိကထားပါသည်။ တစ်ယောက်ချင်းစီ၏ ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်များ၊ နိုင်ငံရေး ခံယူချက်များမှာ အဖွဲ့နှင့် မပတ်သက်ပါ။ ထိုပြဿနာ ငြင်းခုံချက်များ အတွက်ကြောင့်လည်း အဖွဲ့ကိုလက်ညှိုးထိုး၍မရပါ။
ထို့ကြောင့် အဖွဲ့၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေလိုသော ဆန္ဒကို ရှေ့တန်းတင်၍ အမှားအမှန်ကို မစဉ်းစား မချင့်ချိန်ပဲ အမုန်းတရားကို ရှည်စေမည့် အပြုအမူ အပြောအဆိုများ မလုပ်ကြပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ အမုန်းများကိုချန်ထား၍ တစ်ဦးကို တစ်ဦးလေးစားပြီး မှန်သောအလုပ် လုပ် မှန်သောစကားကိုသာ ဆိုကြပါလျှင် ယဉ်ကျေးမှုကြီးသော အသိုင်းအ၀ိုင်းတစ်ခုကို ချစ်ချစ်ခင်ခင် ထူထောင်နိုင်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
maung moe nyo October 10, 2010 at 3:04 pm Reply
It isasad thing that we, the Burmese community, still cannot get along even in this free world. It is easy to put the blame but takes time to buildaunity. Besides we are so used to putting popularity in front of our true identity. There are several Burmese organizations scattered all over! No attempt is made to come to table to formaunique organization. Don’t be surprised if you find Burmese who fight each other to go on stage (e.g. ribbon cutting ceremony!). But none of them are at hand when continuing support is needed for those families who desperately need help or advice.
moses August 6, 2010 at 4:53 pm Reply
Good thinking, thar aye.this is not our country.one day u will need help from UNOB.
Thar Aye August 4, 2010 at 11:26 pm Reply
Well..I’m thinking to beaUNOB member..
moses August 4, 2010 at 6:39 pm Reply
THAT ‘S A GOOD STATEMENT FOR ALL OF US.THERE IS A WORD THAT I WANT TO SAY “If your eyer’s are blinded with your worries,you can’t see the sun set”.